नर्सलाई जागिरबाट निकाल्नेविरुद्ध कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौं : अध्यक्ष राई – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख २८ गते ८:३०
विरामीसँग सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष समय बिताउनु भनेकै नर्सहरूले हो। त्यसैले उनीहरू उच्च जोखिममा हुन्छन्। अहिले कोरोना भाइरसले विश्वभर महामारीको रुप लिइरहेको समयमा नर्सहरू पनि अग्र मोर्चामा उभिएर लडिरहेका छन्। यसरी काम गर्दा उनीहरू थुप्रै चुनौतिको सामना गर्नु परिरहेको छ। उनीहरूले कस्तो समस्या खेप्नु परिरहेको छ? यसमा सरोकारवाला निकायले के गरिरहेका छन्? नर्सहरूका लागि के गरिनुपर्छ र पर्थ्याे ? यही पेरिफेरिमा रहेर नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा.मनकुमारी राईसँग हेल्थपोष्ट नेपालका लागि यज्ञराज जोशीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नर्सिङ पेसामा कोरोना महामारी र लकडाउनको असर कस्तो परेको छ?
असर परिरहेको छ। सुरुसुरुमा पिपिई नपाएको, नयाँ खालको संक्रमण भएकाले त्रासको बातावरण थियो। अहिले विस्तारै पिपिई पनि उपलब्ध भएको छ। नर्सहरूले पनि यस बारेमा पछिल्लो समयमा थुप्रै कुरा बुझ्नु भएको छ। त्यसैले विस्तारै समस्याहरू समाधान भइरहेका छन्।
विरामीको सम्पर्कमा सबैभन्दा बढी नर्सहरूले नै बस्नुपर्छ, यस्तो बेला चिकित्सकिय सामग्रीदेखि मानसिक तनावसम्म उहाँहरूले खेप्नु परिरहेको छ, यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गरिरहनु भएको छ?
मनोबैज्ञानिक असरबारे बुझ्न डाइरेक्ट उहाँहरूसँग गएर कुरा गरेका छैनौं। टिम लिटरसँग र सम्पर्क भएका बैनीहरूसँग फोनबाटै के कस्तो समस्या छ भनेर बुझ्ने गरेका छौं। भ्यालि बाहिरको कुरा गर्दा त्यहाँ नाम शाखा छन्। त्यहाँका अध्यक्ष, प्रतिनिधिहरू, सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ।
ओपिडी सेवा बन्द हुँदा थुप्रो नर्सहरू जागिरी गुमाउनु परेको अवस्था छ, यहाँहरूसँग कतिले जागिरी गुमाउनु परेको छ, केही तथ्याङ्क छ?
त्यसका लागि हामीले विज्ञप्ति निकाली सकेका छौं। त्यसरी जागिर छोड्नु परेका नर्सहरू कार्यरत अस्पतालमा हामीले करा गरिसकेका छौं। अहिले आम्दानी नभएकाले अस्पतालहरूले तलबको कुरा गर्नुभएको छ। कोभिड अस्पताल भएकाहरूलाई सरकारले नै क्षेतिपूर्ति दिन्छ। त्यसैले उहाँहरूको समस्या भएन। बाँकीको हकमा विस्तारै हामी समाधानको बाटो खोज्छौं।
प्रसेन्टमा भन्दा कतिजतिले जागिर गुमाउनु परेको छ, केही तथ्याङ्क छ तपाइहरूसँग?
अहिले तत्काल छैन। पत्रपत्रिकामा नर्भिकको कुरा बाहिरिएको थियो। हामीले नर्भिकसँग कुरा गर्दा होइन भन्नु भएको छ। र, अहिले एक जनाले पनि हामीले जागिर गुमाउनु प-यो भनेर रिपोर्ट गर्नुभएको छैन।पछि अस्पतालले विज्ञप्ति नै निकालेर नर्सलाई निकालेको भन्ने दावीको खण्डनसमेत गर्यो ।
त्यसो भए कसैले जागिर गुमाएका छैनन् भन्न खोज्नु भएको हो?
हामीसँग अहिलेसम्म कसैको जागिर गुमेको भनेर उजुरी आएको छैन। र, त्यस्तो कसैले मौखिक जानकारी पनि गराउनु भएको छैन। भित्र भित्रै त्यस्तो कतै भएको छ भने हामी लकडाउनपछि खोजी गर्छौं।
अनी, अनुगमनको पाटोलाई कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ?
हामीले अहिले विभिन्न ठाउँमा नर्सिङ स्टाफहरूलाई जिम्मा दिएका छौं। हाम्रा जिल्लाका शाखा छन्। उहाँहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि हामीलाई जानकारी दिइराख्नु भएको छ। यसरी नै गरिरहेका छौं।
त्यसो भए नर्सहरूलाई आवश्यक पर्ने सामग्री पनि पर्याप्त रहेको पाउनु भएको छ?
हो, हामीले आवश्यक पर्ने प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्टहरू राम्रो रहेको पाएका छौं। फिगर क्लिनिकमा बस्नेको छुट्टै, आइसोलेसनमा बस्नेको छुट्टै, आइसियुमामा बस्नेको छुट्टै छ। पछिल्लो समय सबैलाई पुग्दो मात्रामै रहेको पाइएको छ।
अनुगमनका क्रममा जागिर गुमाएको र पैसा नपाएको पाउनु भयो भने कस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुन्छ?
त्यसका लागि हामी डिटेलमै छानविन गर्छौं। के कारणले कस्तो समस्या हो भन्ने बुझेर कारबाही गर्छौं। नर्सहरू नै डिउटीमा नआएर समस्या भएको होकी। एक दुई ठाउँबाट त्यो कुरा पनि आइरहेको थियो। कोरोनाको कारणले इन्कम भएन भन्दै जागिरबाट निकाल्नेलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्छौं। त्यसपछि सम्बन्धित निकायले आवश्यक कारबाही गर्छ।
चुनावको समयमा तपाइहरूले उठाएका एजेन्डाहरुमा कत्तिको ध्यान दिइराख्नु भएको छ?
त्यसै अनुसार नै अगाडि बढिरहेका छौं। डिएन पढ्ने कुरा रोकिएको थियो। त्यो अहिले मिलिसकेको छ। बाँकी ७५ प्रसेन्ट इस्कलरसिप कसरी मिलान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले अगाडि सारेका छौं। अन्य कुरा हामी लकडाउनपछि प्रायोरिटी अनुसार विस्तारै गर्छौं।
जसरी हाम्रा दिदी बहिनीहरू कोभिडमा खट्नु भएको छ। उहाँहरूको काम र साहसको हामी सम्मान गर्छौं। उहाँहरूलाई चाहिने सेवा सुविधाका कुरामा हामी सरकारलाई दवाव दिन तयार छौं। गरिरहेका पनि छौं। अन्त्यमा सबैलाई सुरक्षीत रहेर जनताको सेवा गर्नुस् भन्न चाहन्छु।
प्रा. मनकुमारी राई